Tran Thị Nga, Mpikatroka Vietnamiana Voasazy 9 Taona An-tranomaizina Noho Ny Fanaovana ‘Fampielezan-kevitra’ · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny English, Italiano, हिन्दी, Français, русский, Español, English
Niditra tao an-tranon'i Trần Thị Nga ny ekipan'ny polisy mba hisambotra azy tamin'ny volana Janoary. (Sary: Ba Sam)
Tao amin'ny Loa, vohikalam-baovao sady tetikasan'ny onjam-peo an-tserasera ao amin'ny Viet Tan izay mandefa tantara momba an'i Vietnam, ity lahatsoratra avy amin'i Don Le ity. Navoaka eto amin'ny Global Voices indray izany izay tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nanameloka mpikatroka ara-tsosialy hafa iray indray ny manampahefana Vietnamiana tamin'ny famonjana azy an-taonany maro, ary manohy ny andiana sazy mavesatra amin'ireo feo manivaka. Nandritra ny fitsarana izay naharitra tontolo andro tamin'ny Talata 25 Jolay 2017, nanameloka an'i Tran Thị Nga sivy taona an-tranomaizina sy dimy taona any amin'ny toerana voaara-maso manokana noho ny “fitarihana fampielezan-kevitra manohitra ny fanjakana” ny Fitsarana Entim-bahoaka ao amin'ny faritanin'i Nam Hà.
Nga, 40 taona , fantatra ihany koa amin'ny anarana mpanoratra hoe “Thúy Nga,” dia mpanandra-teny fanta-daza ho an'ny mpifindra monina sy ny zo hanan-tany. Nanao tatitra sy fampielezan-kevitra ihany koa izy manohitra ny herisetra ataon'ny polisy tao amin'ny pejiny Facebook sy ny fantsony YouTube. Nahazo fandrahonana matetika i Nga ary noratrain'ny polisy noho ny asany.
“Tena didim-pitsarana tsy ara-drariny izao. Tsy meloka i Nga araka ny voalazan ‘ny fitsarana,” hoy ny mpisolovavan'i Nga, Hà Huy Sơn tamin'ny Reuters.
Nitsikera an'i Hà Nội noho ny fisamborana azy ny fikambanana iraisampirenena mpiaro ny zo. Namoaka fanambarana talohan'ny didim-pitsarana azy i Phil Robertson, tale lefitry ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona ao Azia .
Tafahoatra ny zavatra ataon'ny governemanta Vietnamiana hampanginana ireo mpitsikera, ary mikendry ny mpikatroka tahaka an'i Trần Thị Nga amin'ny fiampangana sandoka izay mitondra ny sazy an-tranomaizina lava, ary manao ireo fianakaviany ho eo ambanin'ny fanenjehana sy ny fanararaotana.
Nisy ny vavolombelona nilaza fa nanodidina ny fitsarana ny polisy an-jatony mba hanakanana ny mpanohana an'i Nga tsy hivory eo ivelan'ny fitsarana. Nampiseho ny lahatsary [eny am-pisidinana] flycam iray fa nanakana ny lalambe manodidina ny mpitandro ny filaminana.
Tsy navela hiditra ny fitsarana ny vadin'i Nga sy ny zanany roalahy , ary voatery niandry tety ivelany .
Nanoratra tao amin'ny tsanganana tao amin'ny Facebook ny vadiny, Phan Văn Phong:
Tsy nandray anay ny fitsarana, noho izany dia nirenireny manodidina ny lalambe teny izahay. Reraka izahay ary nitady malokaloka fialokalofana izy roalahy mba hipetrahana sy hakana aina vetivety.
Tsy navela hiditra ny fitsarana hanatrika ny fitsarana azy ny vadin'i Trần Thị Nga sy ny zanany roalahy . (Sary: Facebook/Trương Minh Hưởng)
Na dia teo aza ny fanakanana tamin'ny ho tokony fitsarana ampahibemaso, dia nipetraka manodidina ny fitsarana ireo mpikatroka am-polony mba hanao fanoherana ny dingana tsy rariny ary nitaky ny famotsorana an'i Nga . “Tsy meloka i Thuy Nga,” hoy izy ireo tamin'ny sora-baventy.
Mampiseho ny polisy miakanjo sivily mifanehitra amin'ny mpanao hetsi-panoherana am-pilaminana ny lahatsary, misintona sy mandrovitra ny sora-baventy teny amin'ny mpanohana an'i Nga.
Manamarika ny fironana mampanahy ho an'ny mpikatroka maneho hevitra an-kalalahana ny didim-pitsarana azy. Tamin'ny Jona 2017, voasazy folo taona an-tranomaizina tamin'ny fiampangana mitovy amin'izany ihany koa ilay bilaogera malaza Nguyễn Ngoc Như Quỳnh, izay nanoratra tamin'ny anarana maha-mpanoratra “Mother Mushroom.” Ao amin'ny tranga iray hafa, nosamborin'ny manampahefana ao an-toerana ny mpikatroka ara-tsosialy iray ao amin'ny faritanin'i Nghệ An ny hariva talohan'ny nitsarana an'i Nga , ary niampanga azy tamin'ny “fikasana hanongam-panjakana.”
Mpikatroka nitokona nanao sit-in teo ivelan'ny Fitsarana Entim-bahoaka Hà Nam . (Sary: Facebook/Nguyễn Thuý Hạnh)